अख्तियार प्रवक्ता कार्की भन्छन्– अब लोकमानको बचाउ आयोगले गर्दैन - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
अख्तियार प्रवक्ता कार्की भन्छन्– अब लोकमानको बचाउ आयोगले गर्दैन	प्रतिशाेधको भावनाबाट आयोगले फाइल पल्टाउने वा कारवाही गर्दैन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्द सासंदमा महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल जारी छ । अख्तियारजस्तो संवैधानीक निकायका पदाधिकारीहरु नै नैतिकवान नभएकोे चर्चाले जनमानसमा अख्तियारका काम कारवाहीहरुप्रति नै अविश्वासको स्थिती पैदा भएको देखिन्छ । अख्तियार प्रमुख कार्की निलम्बित भएसँगै आयोगको अनुसन्धान प्रकृयामै जनताले आशंका गर्न थालेका छन । यहि संन्दर्भमा लोकराज जैसीले अख्तियार अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता गणेशराज कार्कीसँग कुराकानी गरेका छन् । उनले आयोगका कामहरु पारदर्शी रुपमा अगाडि बढाउने र निलम्बित कार्कीको विषयमा संवैधानीक व्यवस्था अनुसार प्रकृया अघि बढेको तर्क गरेका छन । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानी –सम्पादक
मुख्य आयुक्त लोकमानसिंह कार्की पदबाट निलम्बित भएको अवस्थामा अख्तियारका काम कारवाहीहरु कसरी अगाडि बढेका छन् ? आयोग यतिबेला केमा केन्द्रित रहेको छ ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका मुख्य आयुक्तको निलम्बन भएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रमुख आयुक्त नहुँदा दैनिक काम संचालनका लागि कार्यवाहक आयुक्तको व्यवस्था गरेको छ । यस अर्थमा आयोगले पूर्णता पाएको पनि छ ।
आयोगले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पाएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आफ्ना नियमित कामकारवाही संचालन गरिरहेको छ । हामीले आयोगमा आएका निवेदन तथा भ्रष्टाचार,अनियमितता,आर्थीक हिनामीनाका मुद्धाहरुमा अनुसन्धान प्रकृया जारी राखेका छाैं।
आयोगले पहिलेदेखि अनुसन्धानमा रहेका मुद्धाहरु र नयाँ निवेदन परेका केसहरुको विषयमा विभिन्न ढंगले आफ्नो काम कारबाही संचालन गरिरहेको छ । आयोगले व्यक्तिगत चाहनाको आधारमा कहिल्यै काम गर्दैन, सामुहिक हित र कानुनी प्रकृयाको आधारमा हामीले काम गरिरहेका छौं।
प्रमुख आयुक्तको निलम्बन भएसँगै आयोगले केहि राजनीतिक शिर्ष नेताहरुले भ्रष्टाचार गरेकोबारे पहिले अनुसन्धान गरि थन्क्याएका फाइलहरु खोल्दैछ भनेको सुनिन्छ नी, हो ? यतिबेलै ति फाईलहरु खोल्नुपर्ने कारण के ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालको संविधान,ऐन,कानुन सम्मत ढंगले गठन भएको निकाय हो । हामीले कसैमाथि पनि आग्रह वा पुर्वाग्रह राख्ने कुरै आउँदैन । यहाँ जे जति पनि प्रकृया हुन्छन, कानुनी आधारमा गरिन्छन् । हाम्रो साझा उद्देश्य भनेको भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माणमा टेवा पुर्याउने नै हो ।
आयोगको आयुक्त फेरिने वा उनलाई कुनै कसुर लाग्ने एउटा विषय हो भने आयोगका कामहरु निरन्तर संचालन हुने अर्को विषय हो । भन्नुको मतलब आयोगका कामहरु रोकिँदैनन र रोकिनु पनि हुदैँन ।
आयोगले कुनै पनि प्रलोभनमा नपरि आफ्नो कामहरु संचालन गरेको छ,यसमा कुनै आशंका गरिनु हुदैन । हामीले सामुहिक हित र कानुनी प्रकृयाका आधारमा काम गरिरहेका छौ ।
प्रमुख आयुक्तमाथिनै भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ, यो विषयलाई अख्तियारले कसरी बुझेको छ ? उनी प्रति अख्तियारको बुझाई के हो ?
निलम्बनमा परेका अख्तियारका प्रमुखमाथी लागेको भ्रष्टाचारको आरोपबारे आयोगले बोल्ने कुरा होइन । संवैधानिक व्यवस्थाभित्र रहेको मानिस जसको संवैधानिक रुपमा उच्च नैतिक चरित्र बनेको छ, त्यसको विषयमा आयोगले भन्दा पनि व्यावस्थापिका ससंदले नै आवश्यक प्रकृया पुरा गर्दछ ।
उहाँको विरुद्धमा सांसदले दर्ता गरेको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि व्यावस्थापिका सदनमा न्यायीक प्रकृयाको आधारमा छलफल हुन्छ, कानुनभन्दा माथी कोही हुनै सक्दैन ।
उक्त महाअभियोग प्रस्तावको ससंदको एक चौथाई संख्याले पास हुने भएको हुँदा त्यसमाथीको छलफल सकिएको छैन । संवैधानिक प्रकृया अनुसार उक्त महाअभियोगको प्रस्तावको बारेमा सदन मार्फत हुने काम चलिरहेको छ ।
व्यवस्थापिका संसदबाट उक्त प्रस्ताव पास भएको छैन, अझै त्यसको रिजल्ट आउन बाँकी नै छ । आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले व्यावस्थापिका ससंदबाट जे जस्तो निर्णय आएपनि त्यसको शिरोधार्य गर्छ । त्यसमा आयोगको फरक मत रहँदैन ।
अख्तियारले आफ्नो निश्पक्षतामाथिको जनविश्वास घटाएको देखिन्छ, अब अख्तियार नरहने वा विघटन हुनसक्ने कुराहरु पनि सुनिन्छन नी ?
अख्तियारका मुख्य आयुक्तको निलम्बन भएपछि पनि आयोगले संवैधानिक आधारमै पूर्णता पाएको छ । लोकमानजी माथि जुन आरोप लागेको छ, त्यसको विषयमा सम्बन्धित निकायमार्फत प्रकृया अगाडि बढेको छ । आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर नियमित काम गरिरहेको अवस्थामा जनविश्वास घटेको भन्न मिल्दैन ।
कानुनी आधारमा अपराध प्रमाणित भएमा जो सुकैलाई पनि ऐन कसुर अनुसार कारवाही हुन्छ ।
संवैधानिक पद्धती अनुसार अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगको काम सकिएको वा आवश्यक छैन भनि विघटन गर्ने दिशामा दलहरु अघि बढ्छन् वा बढ्दैनन् त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन । हामीले संवैधानिक दायरामा रहेर आयोगका कामहरु निस्पक्ष ढंगले गर्नुपर्छ, आयोगले गरिरहेको छ ।
त्यसो भए संवैधानिक अधिकार प्राप्त आयोगले राजनीतिक दलका भ्रष्टचारको आरोप लागेकाहरुलाई कारवाही गर्ने साहस गर्छ कि गर्दैन त ?
अख्तियारको नजरमा को राजनीतिज्ञ वा कुन पेसाको भन्ने हुँदैन र आयोगले कुनै प्रकारको राजनीतिक,आर्थिक,सामाजिक वा मानप्रतिष्ठाको प्रलोभनमा परेर काम गर्नुहुदैन, यो कसैलाई अधिकार छैन पनि ।
आयोगले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका वा शंकास्पद मानिसको विषयमा अनुसन्धान गर्ने काम आयोग रहँदासम्म रोक्न मिल्दैन । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नकै लागि यो आयोगको आवश्यकता परेको हुनाले हामी त्यो दिशामा निरन्तर लागेका छौं ।
संविधान र ऐन कानुनभन्दा माथि कोहिपनि छैन, आयोगले कसैसँग कुनै प्रकारको प्रतिशोध गर्ने कुरै हुँदैन । अनुसन्धानको क्रममा दोषी प्रमाणित भएमा मुलुकको प्रचलित ऐन कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार कारबाही हुने हो ।
आयोगले कानुन विपरित गएर कसैमाथि कुनै प्रकारको फाइल पल्टाउने वा कारवाही गर्ने कुरै हुँदैन ।
निलम्बित कार्कीको बचाउ वा समर्थनमा कुनै प्रमाणहरु आयोगसँग छन ? यो प्रकृयामा आयोगले के भन्छ ?
हेर्नुस्, यो विषयमा आयोगले केहि पनि भन्न मिल्दैन । यो विषय एउटा प्रकृयामा गएको छ । त्यसको कानुनी प्रकृयाको आधारमा अन्त्य हुन्छ, जुन आयोगलाई पनि स्वीकार्य हुन्छ ।
आयोग कसैको पक्ष वा विपक्षमा उभिने निकाय हुँदै होइन । जसरी बाहिर मिडियाहरुमा समाचारहरु विभिन्न कोणबाट आएका छन, ति सबै सत्य पनि छैनन् ।
कुनै एक व्यक्तिमाथि लागेको अभियोगको कानुनी आधार सम्बन्धित निकायले नै खोज्छ । र त्यसको बचावट पनि उहाँ आफैले गर्ने कुरा रहन्छ । आयोगले यो विषयमा कानुनी व्यवस्था अनुसार हुने सबै निर्णयहरु मान्दछ । यो संवैधानिक निकाय हो ।
कात्तिक ११ गते, २०७३ - १६:५८ मा प्रकाशित